TAXANAHA FALANQEYNTA SUUQA: Muxuu Mohamed Salah Kusoo Kordhin Karaa Liverpool? Yaa Bedelaya Ronaldo Hadii Uu Ka Huleelo Real Madrid? Sadex Saxiix Oo Haday Barcelona Sameyso Ka Saacidi Kara Champions League Iyo Qodobo Kale Oo Aad U Xiiso Badan – Kooxda.com
Home 2017 June Champions League, Europa League, France, Ingiriiska, Italy, Jarmalka, Spain, Suuqa, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino TAXANAHA FALANQEYNTA SUUQA: Muxuu Mohamed Salah Kusoo Kordhin Karaa Liverpool? Yaa Bedelaya Ronaldo Hadii Uu Ka Huleelo Real Madrid? Sadex Saxiix Oo Haday Barcelona Sameyso Ka Saacidi Kara Champions League Iyo Qodobo Kale Oo Aad U Xiiso Badan
Asalaamu Calaykum Waraxmatulaahi Wabarakaatuhu dhamaan akhristayaasheena sharafta lahoow Ramadaan Mubarak meel kasta oo aad dunida daafaheeda ka joogtaan. Kusoo dhawaada barnaamijkeenii usbuuclaha ahaa ee TAXANA FAAQIDAADA SUUQA oo uu usbuuc walba maalin kasta oo isniin ah idinla socodsiiyo aniga oo Mustafe Atam ah.
Suuqa kala iibsiga xagaagan ayaa dhawaan furmi doona waxaana iskasoo daba dhacaya wararka xanta ah ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo aad maalin kastaba kala socotaan majallada Kooxda.com oo si hagar la’aana idiinku soo tabisa dhamaan wararka caalamka kubada cagta iyo Ciyaaraha.
Barnaamijkeena usbuucan waxaynu kusoo qaadan doonaa Muxuu Mohamed Salah kusoo kordhin karaa Liverpool? Wa’ayo Bedelka Ronaldo ee Real Madrid? Sadex Saxiix Oo Barcelona Ka Saacidi doona Champions League Iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan.
Muxuu Mohamed Salah Kusoo Kordhin Karaa Liverpool?
Kooxda Liverpool ayaa qarka u saaran inay sameeyaan saxiixoodii ugu horeeyay ee xagaagan iyaga oo rikoorkooda suuqa kala iibsiga u jabinaya Mohamed Salah.
Lacagta ay Reds ku dalbanayaan Mohamed Salah ayaa ah aduun dhan £39.4 Milyan, rikoorkoodii hore ee suuqa wuxuu ahaa £35 Milyan oo ay kulasoo wareegeen Andy Carroll.
Hadaba xubinteenan ayaynu ku faaqidaynaa saxiixa Salah kaasi oo la sheegay inuu caafimaadka u marayo Liverpool.
Waa Sidee Istaatikada Salah?
Maxamed Saalax xilli ciyaareedkii dhamaaday wuxuu caawiye ka noqday 11 gool oo Serie A ah. Wuxuu sameeyay 71 Baas oo miro dhal ah(Key Passes).
Wiilka masaariga ah ayaa sidoo kale noqday gool dhaliye laga cabsado isaga oo xilli ciyaareedkii dhamaaday magiciisa ku qoray 19 Gool dhamaan tartamada.
Muxuu Ku Fiican Yahay Salah?
Hibada ugu cajiibsan ee Saalax lagu galladay waa Xawliga iyo xawaaraha(Pace). Wuxuu awoodaa inuu kala dhantaalo daafac kasta oo ka hor yimaada.
Sidoo kale wuxuu leeyahay tayo dhameeys tir oo goosha ah. Wuxuu goosha ka toogan karaa meel dheer iyo meel dhow, koorner iyo qumaati intaba.
Miyuu Ku Haboonyahay Liverpool?
Kooxda Jurgen Klopp waxay jeceshahay inay ciyaaraan kubad rogaal celis degdeg ku dhisan, waxaana taaktikadan kasoo bixi kara Mohamed Salah.
Xawliga Salah wuxuu qiimo dheeri ah u yeeli doonaa tayada Sadio Mane. Labadan xidig ayaa soo bixi doona mid kamida safka weerarka ee ugu halista badan horyaalka ingiriiska hadii ay iska garab ciyaaraan.
Liverpool Maxay Uga Baahantahay Salah?
Maadaama kooxda Liverpool ay xilli ciyaareedkan soo socda ka qeyb gali doonto tartamo badan oo ay kamid yihiin EPL, FA Cup iyo waliba Champions League waxay baahi u qabaan xidigo tayo leh.
Marka uu Sadio Mane kaa dhaawacmo ama kaa maqnaado, waxaa walaaca ku ilowsiin kara ciyaartoy sida Salah oo kale ah.
Si kastaba ha ahaatee Liverpool ayaa noqon doonta kooxaha looga cabsi qabo horyaalka hadii ay lasoo wareegaan Mohamed Salah.
Todoba Sabab Oo Ay Tahay Inaysan Chelsea Isaga Fasixin Cesc Fabregas
Cec Fabregas ayaa bishii janaayo aad loola xiriirinayay kooxo kala duwan balse wuxuu kusii negaaday Stamford Bridge. warar badan waxay sheegayeen inuu xagaaga go’aansan doono mustaqbalkiisa waxaana xaaladiisa isha ku haysa kooxda AC Milan.
Hadaba xubintan ayaan ku falanqeyn doonaa 7 arimood oo markhaati u noqonaya inaysan Chelsea iska iibin ruug cadaagan.
1. Waa Khad Dhexe Oo La Isku Haleyn Karo
Waxyaalaha ugu wanaagsan ee xidiga lagu qiimeeyo waxaa kamid ah isku haleynta. Waa Tayo aysan lacagtu goyn karin.
Wuxuu ka war qabaa jirkiisa iyo caafimaadkiisa iyo waxyaalaha ka hor istaagi kara inuu joogteeyo qaab ciyaareedkiisa.
Sidoo kalena waa waayo arag aqoon u leh qaabka la isugu diyaariyo kulamada kahor in lasoo xusho.
2. Wuxuu Aqoon U Leeyahay Premier League
Marka la isku daro wakhtigii uu xidigan kasoo ciyaaray Arsenal iyo Chelsea; waa nin aqoon durugsan u leh kubada laga ciyaaro horyaalka Ingiriiska.
Chelsea waxaa macquul ah inay soo iibsato xidig lamid ah Fabregas? Lkn waxaa isweydiin mudan ma la qabsan doonaa horyaalkan?
Fabregas waa mashiin iyo gool quudiye ay adagtahay in la helo naqshadiisa. Waa xidiga labaad ee ugu caawinta badan horyaalka ingiriiska marka lagasoo tago Ryan Giggs oo ah Aabaha caawinta EPL.
3. Wuxuu Ku Jiraa Heerka ugu Sareysa Waayihiisa
Xidig kasta waxaa la sheegaa inuu halka ugu sareysa awoodiisa iyo kartidiisu ay tahay sanadaha u dhexeeya 27 ilaa 31. Dabcan Fabregas wuxuu ku jiraa xilligan dahabiga ah.
Waa xilliga uu ugu aragti ficanyahay xidigu, madaalenimadiisa ka sokow wuxuu sheeda ka arkaa baasas aan caadi aheyn.
4. Wuxuu Kala Bartay Xidigaha Chelsea
Cesc Fabregas wuxuu si fiican u kala bartay dabeecada iyo qaab ciyaareedka xidig kasta oo kamida Chelsea wuxuuna awoodaa inuu la jaan qaado min difaac ilaa weerar.
Xidig kale oo lasoo iibiyo waxay ku qaadan doontaa wakhti si uu u kala barto dabeecadaha iyo qaab ciyaareedka xidigaha Chelsea.
Sidoo kale wuxuu la qabsaday taaktikada macallinkiisa haatan isaga oo kasoo baxay khidadan cusub.
5. Wax Fiican Ayuu Muujiyaa
Xidigaha qaar xirfad iyo xariifad ayay muujiyaan balse Caawinta uu Fabregas bixiyo iyo tirada istaaktikada ayaa tusaale noogu filan.
Xilli ciyaareedkii hore wuxuu saftay 19 kulan oo in badan uu keyd kusoo galay lkn wuxuu sameeyay 7 caawin.
Waxaa xusid mudan in xidigan ay isugu mid yihiin dhamaan kulamadu, kuwa waaweyn iyo kuwa yaryarba.
6. Wuxuu Leeyahay Wixii Looga Baahnaa oo Dhan
Hadii ay noqoto dhinaca isku dheeli tirnaanta, doorka uu ka ciyaarayo, iyo daboolida baahiyaha kooxda markii loo baahdo waa tayooyin Eebe ku galladay Fabregas.
Mararka qaar wuxuu gool keenaa iyada oo aad loogu baahanyahay, wuxuu naftiisa ka hor mariyaa kooxda. taasna waxaa keentay khibrada badan oo uu uleeyahay kubada cagta.
7. Waa Xidig Ay Ka Muuqato Daacadnimo
Ma ahan mid isla weyn markii keydka la fariisyo. Waxaad arkaysaa xidigaha qaar oo ka niyad jabsan ama ka xanaaqsan keydka balse isagu ma ahan noocaas.
Markii uu keydka fadhiyay waxaa soo baxayay warar badan oo xan ah lkn wuxuu tilmaamay inuu kooxdiisa ku faraxsanyahay.
Xidig koob aduun ku guuleystay, xidig magac iyo sharaf ku leh kubada cagta, marka uu keydka fariisto waxaa macquul ah inuu ku fekero siduu koox kale u raadsan lahaa lkn Fabregas taas ma uusan sameyn.
Yaa Bedelaya Cristiano Ronaldo Hadii Uu Ka Tago Real Madrid
Halyeeyga iyo hogaamiyaha weerarka Real Madrid ee Cristiano Ronaldo ayaa usbuucan qabsaday shaadhadaha wargeysyada Sportska caalamka. Wararka xanta ee iska soo daba dhacaya ayaa sheegaya in Ronaldo uu xagaagan ka guurayo caasimada Madrid.
Wararka qaar waxay intaas ku darayaan in xidigan uu dalab qaali ah ka helayo kooxdiisii hore eeManchester United.
Ku noqoshada Ronaldo ee Manchester United waxaa suurto galinaya macallimuu Jose Mourinho kaasi oo xidigan kula midoobay Real Madrid.
Hadaba waxaa idweydiin mudan Hadii uu Ronaldo ka huleelo Madrid yaa bedeli doona?
Xaqiiqatan su’aashan ayaa aad la isku weydiinayaa waxayna falanqeeyayaasha kubada cagtu uga jawaabayaan siyaabo kala duwan.
Aan idinla wadaago sadexda xidig ee loogu hadal haynta badanyahay kuwaasi oo la filayo inay noqon karaan bedelka Ronaldo ee Real Madrid.
1. Roberto Lewandewiski
Weeraryahankan reer Poland ayaa ah mid kamida xidigaha loogu hadal haynta badanyahay kuwaasi oo bedeli kara Cristiano Ronaldo.
Xidigan ayaa lagu qiimeynayaa rikoorkiisa gool dhalinta isaga oo xilli ciyaareedkii tagay shabaqa soo taabtay 43 jeer 47 kulan oo uu saftay. Sidoo kalena wuxuu xidigan naadigiisa Bayer Munich u ansixiyay guud ahaan 110 Gool, 147 kulan oo uu saftay.
2. Poulo Dybala
Dahabigan yar ayay dad badan aaminsanyihiin inuu yahay ninka kubada cagta khuurtada ku qabsan doona kadib marka waayaha Messi iyo Ronaldo dhamaadaaan. Waa xidig yar oo aad loo qiimeeyo wuxuuna leeyahay tayo wanaagsan.
Xilli ciyaareedkii dhamaaday wuxuu kooxdiisa u ansixiyay 19 Gool isaga oo sidoo kalena ka caawiyay inuu gaarsiiyo Final-ka Champions League ee Cardiff.
Si kastaba ha ahaatee Dybala ayay dad badan u arkaan inuu noqon karo bedelka Ronaldo ee Real Madrid.
Da’yarkan ayaa isaguna xilli ciyaareedkii dhamaaday muujiyay inuu yahay dheemanka mustaqbalka ee kubada cagta. Wuxuu dad badan xasuusiyay inay kubada cagtu weli xiiso yeelan doonto xataa hadii Ronaldo iyo Messi la waayo.
Xidigan ayaa kooxdiisa Monaco xilli ciyaareedkii hore u ansixiyay 26 gool isaga oo sidoo kalena ka caawiyay inuu gaarsiiyo wareega afar dhamaadka ee Champions League.
Khuburada u dhuun daloosha kubada cagtu waxay aaminsanyihiin in Mbappe uu shaki la’aan noqon karo bedelka dhabta ee Ronaldo ilowsiin doona jamaahiirta Los Blancos.
Sadex Saxiix Oo Barcelona Ka Saacidi Kara Inay Ku Guuleysato Champions League
Kooxda Barcelona oo sanadihii u danbeeyay uruursatay nus darsin koobka La Liga iyo waliba Champions League ayaa xilli ciyaareedkan ku guul dareysatay inay labadan tartan kasoo hoyso guulo wax ku ool ah.
Hadaba qodobkan waxaan idinkula wadaagaynaa sadex xidig oo hadii ay lasoo saxiixdaan Barcelona ka saacidi kara inay Champions League ku guuleystaan.
Tababare Luis Enrique ayaa ka degay jagada tababarenimo ee Blaugrana waxaana dhawaan tababaraha cusub loo magacaabay macallinkii hore ee Athletico Bilboa ninka lagu magacaabo Gaffer Ernesto Valverde.
1. Cesar Azplicueta
Daafacan ayaa si weyn ugu qanacsan inuu lasii joogo kooxda Chelsea lkn wali waxaa suurto gal ah inuu u wareego Barcelona suuq ciyaareedkan inagu soo aadan, waa hadii ay Barcelona ku dadaasho e.
Wiilkan reer Spain ayaa Barceloma kusoo kordhin kara tayo muuqata sababtoo ah wuxuu ka ciyaari karaa boosas dhowr ah oo daafaca ah. Sidoo kalena waa xidig la qabsan kara taaktikooyin kala duwan.
Wiilkan reer France oo u ciyaara kooxda Athletico Bilboa ayaa lagu qiimeeyaa inuu yahay xidigaha ugu wanaagsan La Liga.
Xidigan oo 23 sano jir ah ayaa safka koowaad ee Bilboa kasoo ciyaaray 4 xilli ciyaareed oo xiriir ah wuxuuna qandaraaskiisa dhici doonaa 2020.
Waxaa qanaraaskiisa lagu burburin karaa aduun dhan €65 Milyan. Tababaraha Barcelona ee Velverde ayaa u sahli kara inuu xidigani soo cago dhigto Camp Nou maadaama ay horay ugu midoobeen kooxda Athletico Bilboa.
Hadaba Laporte ayaa Barcelona kusoo kordhin doona waxqabad muuqda, waa hadii ay lasoo wareegaan e.
Wiilka reer Talyaani ayaa aad loola xiriirin inuu kooxdiisa PSG uga wareegayo dhinaca Barcelona.
Khadkan dhexe ayaa leh kubad jiidasho wanaagsan, kubad sameyn iyo koontaroolid heersare ah isaga oo ciyaarta saameyn weyn ku yeesha.
Verratti ayaa bedeli kara Andre Gomes kaas oo ku guul dareystay inuu saameyn ku yeesho safka Barcelona. Balse Verrati ayaa u muuqda xidig heer caalami ah kaas oo Barcelona ka saacidi doona inay ku guulaystaan Champions League.
Shan Xidig Oo Mucjiso Noqday Kadib Markii Ay Premier League Ka Tageen
Horyaalka Ingiriiska ayay xidigo tayo leh kasoo baxaan waxayna dad badan u arkaan horyaalka ugu weyn caalamka kubada cagta.
Xidigaha tayada leh kasokow waxaa jira xidigo badan oo ku guul dareystay inay kooxdooda saameyn badan ku yeeshaan intii ay joogeen horyaalka Ingiriiska. Waxaa kale oo jiro xidigo badan oo wakhtigu ka hiiliyay xilligoodii Horyaalka Ingiriiska balse markay horyaal kale u wareegeen noqday xidigo lagu tashado.
Xubinteenan waxaynu ku qaadaa dhigaynaa shan xidig oo ku guul dareystay inay saameyn xoogan ku yeeshaan horyaalka Ingiriiska balse markay horyaalo kale u wareegeen isku bedelay dheeman lagu riyoodo.
1. Stefan Savic-Manchester City
Xidigan ayaa Manchester City kusoo biiray samadkii 2011kii isaga oo markaasi jiray 20 sano kaliya. Wuxuu noqday xidig ku guul dareystay inuu kasoo muuqdo safka hore ee Manchester City.
Ugu dambeyntiina waxay daafac kaga badasheen kooxda reer Talyaani ee Fiorentina. Xidigan ayaa noqday shumac ka dhex muuqda guud ahaan horyaalka talyaaniga wuxuuna ugu danbeyn ku biiray kooxda Atletico Madrid isaga oo xilli ciyaareedkii hore saftay 30 Kulan oo La Liga ah.
Xidigan ayaa sidoo kale noqday ninkii u horeeyay ee Reer Montanegro ah kaasi oo kasoo muuqda Champions League Final(2016, Lisbon).
2. Shekodran Mustafi-Everton
Qolooyinka kubada cagta daraasaadka ku sameeya ayaa la yaabay sida ay Everton isaga iibisay Maroune Fellaini, sidoo kale waxay la yaabi doonaan hadii ay Mercyside Blues iska iibiso dahabiga reer Belgium ee Romelu Lukaku. Lkn waxayna dad badan ogeyn in Shekodran Mustafi laftiisa ay Everton iska dirtay.
Sanadkii 2009 ayuu Mustafi kusoo biiray Everton wuxuuna la qaatay 3 xilli ciyaareed oo uu ku guul dareystay inuu kooxda ka dhex muuqdo. Ugu danbeyn waxay si xor ah inuu ugu biiro u ogolaadeen Sampodria.
Ugu danbeyntii wuxuu usoo wareegay Valencia isaga oo laf dhabar u noqday daafaca kooxdan reer Spain. Intaas kadibna waxaa lacag rikoor ah kulasoo wareegtay naadiga Arsenal.
Ma waxaad u maleysay De Bryune iyo Lukaku inay ahaayeen xidigaha ugu wanaagsan ee uu Jose Mourinho ka diray Chelsea? Xaqiiqatan Arjen Robben ayaa u muuqda dahabiga qaaliga ah ee uu Jose ka diray Chelsea.
Robben ayaa 3 xilli ciyaareed la qaatay Blues balse waayihiisa Stamford Bridge waxaa curyaamiyay dhaawacyo tiro badan oo soo noqnoqday.
Ugu danbeyn waxay Chelsea ka iibisay Real Madrid isaga oo kadibna ku biiray Bayer Munich. Wakhti xaadirkan isaga oo da’da sodonka madaxa la galay ayuu Hollaandeeskani yahay mid kamida awoodaha ugu waaweyn ee ay Bayer Munich ku duulaan.
Gerard Pique-Manchester United
Kahor intii uusan koobab badan ku guuleysan, oo uusan Social Media qabsan, oo uusan Shakira guursanin, Pique wuxuu ahaa xidig ku jacdaday Kursiga keydka kooxda Manchester United. Wakhtigii dahabka ahaa Manchester United markaasi oo ay ciyaarayeen halyeeyada sida Van Nistelrooy, Ryan Giggs iyo Paul Scholes ayuu ninkan reer Spain ku biiray shayaadiinta cas-cas.
Nasiib xumo se Rio Ferdinand iyo Nemanja Vidic oo sida birlabta u adag ayuu kula kulmay qolka labiska ee Manchester United wuxuuna ku guul dareystay inuu helo fursad uu ku ciyaaro.
Intaasi kadib ayuu Pique si xor ah ugu laabtay Barcelona isaga oo kamid noqday safka aan la taabanin ee Line Upka Barcelona.
Jerome Boating-Manchester City
Boetimg ayaa naadiga Man City kusoo biiray sanadkii 2010kii xilligaas oo uu socday qorshaha dib u habeynta kooxda ee Sheekh Maansuur. Sanadkii 2011kii ayuu kula guuleystay FA Cup wax yar kadibna isagoona saameyn badan kooxda ku lahayn ayuu ku biiray Bayer Munich.
Imaanshaha Alianz Arena ayaa wiilkan u noqday inuu qaato casrigiisii ugu wanaagsanaa kubada cagta. Wuxuu kula guuleystay Champions League iyo Nus darsin Bundesliga ah. Waayihiisa kubada ayaana isku shareeray samada.
Ugu danbeyn Man City ayaa go’aankii ay xidigan ku dirtay ka qoomameysay waxayna ilaa haatan la tacaalayaan daafac xumo, walow ay lacago qaali ah kasoo bixiyeen Mangala, Nikolas Otamendi iyo John Stones.
Labadii Saxiix Ee Ugu Xumaa Iyo Labadii Ugu Wanaagsanaa Ee Barcelona Sameyso Tobankii Sano Ee U Danbeeyay
Taariikhda Barcelona ee abid ugu weyn waxay isugu biya shubataa tobankii sano ee ugu danbeeyay. Waa xilliga ay Barcelona noqotay cudud ka muuqata qaarada yurub, waliba waxay marar noqotay kooxda ugu wanaagsan qaarada Yurub iyo caalamkaba.
Waxay noqotay kooxda 10kii sano ee u danbeeyay ugu guulaha badan yurub iyo waliba kooxda looga cabsida badanyahay guud ahaan qaarada yurub. Sidaas darteed, layaab malahan inay xidigaha ugu wanaagsani saf u galaan sidii ay ugu biiri lahaayeen Barcelona.
Xubinteenan waxaynu kusoo qaadanaynaa labadii saxiix ee ugu wanaagsanaa iyo labadii saxiix ee ugu xumaa kuwaasi oo ay Blaugrana sameyso 10kii sano ee u danbeeyay.
Labadii Saxiix Ee Ugu Wanaagsanaa
Barcelona ayaa 10kii sano ee u danbeeyay sameysay saxiixyo tiro badan iyaga oo waliba soo af-duubtay xidigo magac ku leh kubada cagta caalamka. Layaab ma ahan hadii mid kamida labadan xidig uu kamid noqdo safka weerarka Barcelona ee MSN waana wax aad idinkaba filayseen.
1. Luis Suares
Luis Suares ayaa noqday xidig tayo iyo awood dheeri ah kusoo kordhiyay Barcelona isaga oo si layaab leh ula qabsaday Messi iyo Neymar. Sanadkii 2014kii ayuu kusoo biiray kooxda isaga oo ugu soo wareegay aduun han £65 Milyan.
Xilli ciyaareedkii tagay Luiz Suarez wuxuu shabaqa soo taabtay 59 jeer isaga oo noqday xidiga kaliya ee kabta dahabka iyo waliba abaal marinta Pichichi ku garaacay Messi iyo Ronaldo tan iyo wixii ka danbeeyay 2009 markaasi oo uu abaal marintan ku guuleystay Diego Forlan kaasi oo Messi iyo Ronaldo wado ku riday.
Kadib markii uu casharaan ka bartay Carlos Puyol, Gerard Pique waa hogaamiyaha daafaca Barcelona ee haatan. Xilli ciyaareedadii ugu danbeeyay Pique wuxuu ahaa daafaca ugu wanaagsan Barceloma isaga oo si xoogan usoo shaac baxay.
Sanadkii 2008 ayuu xidigani Barca ugasoo guryo noqday dhinaca Manchester United, tan iyo xilligaasna wuxuu kula guuleystay 24 Koob oo nooc walba leh.
Laga yaabaa qaar badan inay xidigan ku necbaysteen hab dhaqankiisa iyo hadaladiisa ka baxsan garoomada, Lkn hubaal iyo dhab ahaan waa mid kamida daafacyada ugu wanaagsan ee jiilkan.
Labadii Saxiix Ee Ugu Xumaa 10kii Sano Ee U Danbeeyay Kuwaas Oo Ay Barcelona Sameyso
Wiilkan ree Brazil waxay Barcelona kala soo wareegtay kooxda Palmieras sanadkii 2009 isagoo ugu soo wareegay aduun dhan £10 Milyan.
Kooxda Barcelona wax saameyn ah kuma uusan yeelan. Kadibna wuxuu amaah ugu wareegay Benfica halkaas oo uusan iyadana fursad ka helin. Kadib 2010kii ayuu u wareegay Fiorentina isaga oo u saftay 10 kulan wuxuuna u dhaliyay 2 Gool.
Ugu danbeyn Barcelona way soo ceshatay waxayna kadib si xor ah ugu ogolaadeen inuu ku biiro kooxda Coritiba sanadkii 2014kii.
Mudadaas sanadaha aheyd ma uusan xataa hal kulan u safanin Barcelona sidaas darteed waxaa loo calaamadeeyay inu yahay saxiixii ugu xumaa.
Xidigan Barcelona waxay keensatay isla sanadkii 2009 xilligaas oo Pep Guardiola hogaaminayay. Waxeyna kala soo wareegeen kooxda Shakhtar Donatski aduun dhan £18 Milyan.
Xidigan waxaa curyaamiyay dhaawacyo wuxuna Blaugrana u saftay kaliya 13 kulan. Intaais kadib Barcelona ayaa dib uga iibisay kooxda Shakhtar iyaga oo ku bedeshay aduun dhan £10.8 Milyan.
Inta aynaan u guda galin su’aasheena usbuucan, aynu xusno shakhsiyaadka sida saxda ah uga jawaabay su’aasha usbuucii hore. Ku dhawaad toban qof ayaa ka jawaabay su’aasha balse fursada ayaan inoo saamaxeyn inaan dhamaantood halkan ku xusno. Waxaan xusaynaa sadexda shakhso ee ugu horaysa waxaan sidoo kale ka raali galinaynaa asxaabta kale ee tirada badan oo aana magacooda la xusin.
Sadexda shakhsi ee ugu horaysa kuwaas oo su’aashii usbuucii hore ka jawaabay waa:
Hambalyo ayaana idin leenahay.
Hadaba su’aasha usbuucan ayaa u dhigan sida tan:- Waxaan ahay Xidig kasoo ciyaaray horyaalka ingiriiska iyo kan Spain. qarankeyga waxaan u saftay 95 kulan waxaana u dhaliyay 11 gool, waxaana sidoo kale qarankeyga u ahay Kabtan. Kooxdeyda haatan waxaan ugu soo wareegay aduun dhan £33 million waxaana u saftay 214 kulan aniga oo u ansixiyay 11 Gool. Kumaan Ahay??
Akhristayaal intaas waxaa inoogusoo idlaaday barnaamijkeenii usbuuclaha ahaa ee TAXANAHA FALANQEYNTA SUUQA oo aan idinla socodsiinayay aniga oo ah Mustafe Atam. Bogayga Facebook waxaad ku raadin kartaa magaceyga ama riix: Mustafe Atam. Barnaamijkan mid lamid ah inta aan ku kulmayno waxaan idinkaga tagayaa Amaano Alla.
13 thoughts on “TAXANAHA FALANQEYNTA SUUQA: Muxuu Mohamed Salah Kusoo Kordhin Karaa Liverpool? Yaa Bedelaya Ronaldo Hadii Uu Ka Huleelo Real Madrid? Sadex Saxiix Oo Haday Barcelona Sameyso Ka Saacidi Kara Champions League Iyo Qodobo Kale Oo Aad U Xiiso Badan”
A-Rahman June 23, 2017 at 1:55 pm · Edit
modric weeeeye ciyaaryahnkaasi
samiir June 21, 2017 at 4:32 am · Edit
Abdisalan June 20, 2017 at 6:41 am · Edit
Luka modrić weeyan ciyaaryahankasi
Maxamed cawil cali June 20, 2017 at 5:09 am · Edit
Modric ayan u malenayaa mihamed awil dubai
maaxi4 yare June 20, 2017 at 4:16 am · Edit
raygal siciid raygal June 19, 2017 at 11:47 pm · Edit
Run ahaanti. Salah waa xidig dhamaystiran dhan walba welcome to Liverpool mohamed salah socod layaableh iyo dhaqaaq cajiib iyo dhamaystar wanaagsan
ayub bshr jama June 19, 2017 at 11:14 pm · Edit
King moha June 19, 2017 at 9:23 pm · Edit
AJ June 19, 2017 at 8:35 pm · Edit
Ainshez June 19, 2017 at 8:10 pm · Edit
Waxa Cesc F4abregas
Sameer ibnu azizi June 19, 2017 at 5:43 pm · Edit
wa luka modric
Abdirahman Arro June 19, 2017 at 5:31 pm · Edit
Bukhaari jonior June 19, 2017 at 5:17 pm · Edit